Cadeymo: Ahlu-sunna oo soo bandhigtay Heshiiskii ay la gashay Dowladda Federaalka - Awdinle Online
Cadeymo: Ahlu-sunna oo soo bandhigtay Heshiiskii ay la gashay Dowladda Federaalka
October 29, 2019 (AO) – Hoggaanka Sare ee Culimadds Ahlu-suna Wal-jameeca ayaa soo bandhigay nuqul ka mid ah Heshiiskii ay la gaartay dowladda Federaalka bishii June ee sanadkan, xilligaasoo labada dhinac si rasmi ah ugu heshiiyeen in doorashada Madaxweynaha Galmudug ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb.
Awdinle Online ayaa heshay warqad uu Madaxa Xukuumadda Galmudug u diray Beesha Caalamka, kaasoo looga hadlayay xaalada ka jirta Galmudug, xiisadaha siyaasadeed iyo tan ciidan, in dowladdu ay jebisay heshiiskii ay la galeen.
Warqada loo diray Wakiilada Beesha Caalamka ayaa waxaa ku jirtay warqad uu ku saxiixnaa Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdi Maxamed Sabriye oo ahaa heshiiskii Ahlu-sunna iyo dowladda Federaalka galeen bishii June ee sanadkan, kaasoo ahaa heshiiskii uu qoonsaday Madaxweyne Xaaf ee uu magaalada Dhuusamareeb uga baxay.
Qodobada heshiiska ayaa waxaa ku jiray in 35 Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Galmudug ay soo xulaan Ahlu-sunna Wal-jameeca, halka 54 kalena ay odayaasha dhaqanka soo xulaan.
Sidoo kale qodobada waxaa ka mid ahaa in si wadajir ah Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Ahlu-sunna u soo dhisaan Guddiga Farsamada oo ka kooban 11 xubnood, hase ahaatee maalmo ka hor Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa magacawday Guddi Farsamo ka kooban 13 xubnood, waxaana ka soo horjeestay Madaxa Xukuumadda Sheekh Maxamed Shaakir oo sheegay in dowladda ay ka baxday heshiiskii ay la galeen.
Halkan akhriso Heshiiskii dhex maray Ahlu-sunna iyo Dowladda Federaalka
Previous articleXaafado ka tirsan magalada baladweyn Oo ku go,doomay dadka qaar ka mid ah
Next articleSomalia floods: Rescue operation is underway as 10 people still messing, their names